Prof. Jawaari oo shaaciyay in berri lagu dhawaaqi doonno guddiga doorashada madaxweynaha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo shaaciyay in berri lagu dhawaaqi doonno guddiga doorashada madaxweynaha
Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulankii ugu horeeyay ku yeeshay guddoon labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari iyo Cabdi Xaashi C/laahi, kuwaas oo ka wada-hadlay arrimo la xiriira doorashada madaxweynaha ee dalka.
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in labada guddoon ee baarlamaanka ay ka wada-hadleen xoojinta wada-shaqeynta labada gole.
Labada guddoon ayaa sidoo kale isku af-gartay in kulanka ay berri yeelan doonaan labada gole lagu soo magacaabo guddiga doorashadda madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa markii lasoo magacaabo kadib waxay sameeysan doonaan hogaan cusub, iyagoo markaas kadib lagu dhawaaqi doonno xilliga kama dambeyska ah ee la qabanayo doorashadda madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, war-qoraal ah oo dhawaan kasoo baxay beesha caalamka ayaa loogu baaqay guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku da-dajiyaan xilliga doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, oo marar badan hore dib u dhac uu ku yimid.